China eziphuthumayo Bottom Valve ifektri abakhiqizi | UJiasheng
Emergency Ngezansi Valve
Insimbi engagqwali:80/100 (3 ”/ 4”)
Iphrofayela 1: eziphuthumayo wasika valve, efakwe ezansi iloli ethangini ,. Uma i-tanker iba nomthelela omkhulu, i-valve enqamukile izonqamuka ngokuzenzakalela, ihlukanise umzimba wamapayipi kanye nepayipi elingezansi kumzimba ozimele wamathangi, uvimbele ukuvuza kwamanzi futhi kuthuthukise kakhulu ezokuphepha ngesikhathi sokuhamba, ngakho-ke isetshenziswa kabanzi emhlabeni wonke. Lo mkhiqizo uhlangabezana futhi ne-QC / T932-2012 ejwayelekile.
Umsebenzi nezici: isimo esiphuthumayo sinqume ukusetshenziswa kwe-valve aluminium alloy material, cast molding, hard oxidation surface, ukumelana nokubola okuphezulu, izesekeli zayo ngaphakathi zisebenzisa insimbi engagqwali, zandisa impilo yenkonzo yayo.
I-valve engezansi engu-45 °
I-valve engezansi engu-90 °
I-valve engezansi engu-180 °
I-Fuel tanker valve valve ebizwa nangokuthi i-Bottm Valve ifakiwe ezansi kwetanki, izingxenye eziphezulu zivaliwe zivalekile ngaphakathi kwetanki. Umklamo wangaphandle we-shear groove ukhawulela ukuchitheka komkhiqizo lapho i-tanker iphahlazeka phansi, izosika ngokuzenzakalela ngale ndawo ngaphansi kwesimo lapho kungekho kuthinteka ekubekweni uphawu. Lokhu kuzovikela kahle itanki eligingqiwe ekuvuzeni ukuqinisekisa ukuphepha lapho kuthuthwa. Lo mkhiqizo ulungele amanzi, udizili, uphethiloli kanye nophalafini namanye amafutha amancane, ect.
1. Izinto: Aluminium
2. Usayizi: 3 ", 4"
3. Xhuma uhlobo: Square Flange
4. Imodi evulekile: I-Pneumatic
5.Ukushisa: -20 ~ 70 degree
Zuza & Isici
1. Uhlobo Lokulinganisela Ingcindezi
Lapho i-valve ivaliwe, ingcindezi kaphethiloli ayikwazi ukucindezela ukuvula i-valve.
2. Ukwelashwa Okukhethekile Kwendawo
Umzimba wonke we-valve udluliswa ngenqubo ekhethekile yokwenza ngcono i-anti-corrosion.
3. Umzimba we-Hydrodynamic
Idizayini kanye nokuphakanyiswa okuphezulu kunciphisa ukwehla kwengcindezi ukunikeza isilinganiso sokugeleza okuphezulu.
Ihlangabezana nezidingo ezijwayelekile zokunciphisa ukuchitheka komkhiqizo uma kwenzeka ingozi.
5. Idivayisi Yokuvula Ngokwenziwa
Lapho kunesidingo sokukhipha okuphuthumayo, ukulawulwa kwomoya akusizi ngalutho, kungavulwa ngendlela yesandla.
Usayizi we-valve uhlakaniphe ngokwengeziwe, ulungele ukufunwa kwesikhala esincane.
Langaphambilini I-5-Wire Overfill Optic Probe neSocket
Olandelayo: Flange Breather Valve
Emergency Sika Valve
Cisha i-Emergency Valve
Tank Truck eziphuthumayo Valve Ngezansi